Indlela yokwandisa umnqweno embhedeni kumfazi kunye nendoda
Ukulala ngokwesondo, ngokuqinisekileyo, kunokuqinisekisa ukuba ulwalamano oluphuculweyo luze lunwebe nobomi. Kodwa kuthekani ukuba umnqweno wakho wesondo usanda kuwa? Umgangatho we-hormone yesini emzimbeni uthinta amandla esini, ukunyamezela kunye nolonwabo. Uphuhliso lwabo lunokuvuselelwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngendlela yokwandisa umnqweno embhedeni kumfazi kunye nendoda engenamachiza, kwaye iya kuxutyushwa ngezantsi.
Ukuxinezeleka kunempembelelo embi ekuvukeni kwesondo. Kwakhona, ngale ndlela, umsebenzi awuncedisi kude kube sebusuku, okanye ukukhathala kwiimbopheleleko zentsapho. Akumangalisi ukuba, ngokulandelelanisa, amaninzi amabini abelana ngesondo kuphela ngamaxesha ambalwa ngenyanga.
Ngethamsanqa, akukho imfuneko ukujongana namachiza ukubuyisela umdla wokuqala kunye nokukhanga. Uhlobo lusinike izinto ezininzi zemvelo ezikunceda ekubuyiseleni isifiso sesondo esifanelekileyo. Nazi izibonelo ezimbalwa:
Inqanaba lesibhinqa lesoliso liyahlukileyo kwindoda. Kwaye kuyafuneka kukhethwe izikhuthazo ngokwahlukileyo. Ibhinqa kunye nendoda inokwandisa umnqweno wazo ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa kungcono ukuthabatha iindlela zendalo.
1. Insipho eninzi okanye i-shampoo
Abanye bakholelwa ukuba oku kuluqhetseba ukunyusa umdla wakhe ngenxa yokuvumba okumnandi. Enyanisweni, i-extract mint ineziganeko ezimangalisayo ngokwenene. Thenga isepha ngeoli yendalo yembewu, kwaye uya kuvakalelwa ngayo. I-Mint igqugquzela ukuveliswa kwe-hormone yesondo, kunye nefuthe lokupholisa liyakwandisa ukonwabelana ngokwesondo kunye nobukhulu besenzo sesondo ngokwaso. Zama kwakhona iigels kunye neekram nge-extract mint.
Qaphela: ungasebenzisi imveliso ekhethiweyo eneengqungquthela okanye izithako zamakhemikhali. Ukukhishwa kwesikhokelo semvelo kuphela kuya kunika umphumo oyifunayo.
2. Ukudibanisa kwamacube
Ezinye izongezo zendalo ziqulethe izityalo kunye namavithamini, okwandisa ukhenketho ngokwesondo. Izithako ezisebenzayo zihlala ziquka: i-Tongkat Ali, i-ginseng yama-Indian, i-rhodium, i-yodium, i-yohimbine (i-psychoactive substances), ingcambu yomthi (umthi wasePeruvia) kunye ne-itutero (i-shrub isityalo esivela kumntla we-Asia). Impembelelo yabo ekukhuleni kobulili ayifumanekanga ngokukhawuleza, kodwa ngokutya rhoqo (njengoko kuboniswe kwilebula), ezi zithako, ezinye zazo ezisetyenziselwa ukuveliswa kwamachiza, zinokunyusa kakhulu umnqweno wokulala emabhinqa namadoda. Nangona kunjalo, ukumkela kufuneka kuqale ngamanani amancinci, kuba ezinye izongezo zichaphazela kakubi igazi!
3. Iitayiti zemvelo
Imixube yemifuno, kuquka i-raspberry, nettle kunye namaqabunga e-vitex, ngokwezifundo ezithile, ukwandisa amathuba okukhulelwa kwabasetyhini, ukwandisa i-libido, ukulinganisela ukulinganisela kwama-hormone kunye nokuncedisa iingxaki ze-ovulation. Ukuba usela itayi rhoqo, iziphumo zivame ukubonakala kwiiveki ezimbini.
Qaphela: musa ukusela le thayi xa ukhulelwe!
Esi sicebo sele sikhombise ukukwazi kwayo ukwandisa umnqweno wesini, kwaye kunciphisa umngcipheko wokuphulukana nezifo zogcino. Izibonelelo ezivela kwikhono le-sinamon, kunzima ukugqithisa. ICinnamon iyanciphisa ishukela legazi, elinciphisa ukuhamba kwegazi kwisini (okanye ipeni). Ngaloo ndlela, umnqweno wesondo ukhuliswa ngokukhawuleza.
ICinnamon yi-aphrodisiac ngokukhawuleza. Unokuwina kuphela ngokufaka isipuni sesinamoni kwikhofi yakho yasekuseni (okanye ikhekhe).
Imithi enikezelweyo (njenge-Viagra) ingaba nefuthe, kodwa abaninzi bezocansi bawafanisa nomntu omele aqhube imoto yakhe yonke i-3 km. Izidakamizwa zikhuthaza kuphela ukulungiswa, kungekhona ngesondo. Ukuba indoda ayifuni ukulala ngesondo, akukho-Viagra ayiyi kumnceda. Yintoni eya kunceda?
1. I ziNyango zoLondolozo
Ezinye izityalo ezibandakanya izinto ezizimeleyo (njengokuba zibonakaliswe klinikhi) zinokwandisa umnqweno ekulala, zandise kwaye zikhulise ukuzonwabisa kwenkqubo. Ngokuqhelekileyo, le ngqokelela yemvelo iyathengiswa ngeenguqulelo ezimbini, ezifanelekileyo kumfazi kunye nendoda ngokuhlukileyo.
Kubantu, ukubunjwa kubandakanya: Tongkat Ali, ginseng, rhodium kunye ne-root maki (umthi wasePeruvia). Isicelo sithatha malunga neveki ezimbini ukuya kuthi umphumo uyaqhubeka kwaye uyabonakala. Ukongezelela ukwandisa umnqweno wesondo, le mpiliso yamachiza ibeka umgangatho wokusebenza kwezigulane ze-adrenal, i-prostate gland kunye ne-cardiovascular system.
Ezi zendalo zendalo ze-amino acid, indlela yokusebenza efana neViagra, njengoko inceda ukuphucula imithanjeni yegazi (ingakumbi ezo zikhokelela ekubeni i-penis neentliziyo) kunye nokuphucula ukujikeleza kwegazi.
Le mifuno, ethandwa kakhulu kwaye ibonakaliswe kwi-pharmacy, isetyenziselwa ezininzi injongo. Ngokukodwa, kuphucula ukuhamba kwegazi kwingqondo, intliziyo kunye nezitho zangasese, ekuncedeni ukugcina nokugcina ukulungiswa okusisigxina. Abaphandi abaninzi bacinga ukuba esi sityalo siyi-antidote kwimiphumo emibi ye-anti-depressants.
Yenza i-decoction ye-40-80 mg yemifuno nge-100 ml yamanzi kwaye uyiphuze kabini ngosuku. Iqulethe i-antioxidants enamandla eyanciphisa i-radicals yamahhala. Khuselekile ukusetyenziswa kwabasetyhini.
UGinkgo biloba i-antiticoagulant kwaye ingathathwa ngabantu abahlukeneyo. Buza ugqirha wakho okanye ukhemisti ukuba ufanele uthathe. Ngokomgaqo, akukho nxamnye nale nkunkuma.
4. Imbewu yeengqayi
Imbewu yepumpkin inotye kwi-zinc, ekhuthaza ukukhwabanisa ngokwesini kwaye iphucula umsebenzi wokuzala. Ii-Oyster nazo zizityebi kakhulu kule mineral, kodwa ziphantsi kangako ukusetyenziswa kwansuku zonke.
Imbewu yepumpkin ityebile kwi-omega-3 fatty acids, kwaye iphinda ibe "yicocekile" yeemithalo kunye ne-capillaries ezivela kwii-cholesterol plaques.
Ungadla imbewu njengaleyo, kwifom ekhusiweyo okanye eyosiweyo, kwaye ungazifefa isaladi okanye uyifake kwintlama, exutywe nomgubo. Imveliso isebenza ngokulinganayo kwizesini zombini. Kodwa kaninzi kunikwa amadoda.
Intsapho iyaxabana nomhlaba osondeleyo
Ulwazi olusisiseko malunga nokuvuswa kwabantu
Ukunyuka kwangaphambili kwindoda
Amafutha anamnandi athile: khetha i-aphrodisiacs
Indlela yokufundisa umntwana ukuchonga ixesha ngeeholide
I-autumn yinkathi yeemeko eziqhakazileyo
Buckwheat nge shank kwi-multivark
Jessica Alba: Iimfihlo zeBeautiful
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-actinolite
I-celery kunye nesaladi yesaladi
Unokukhusela njani umntwana ngokulimala ngengozi?
Uthando olungathandekiyo luhlala lusebenza kwaye lunonophelo
Igadi yaseJapan enezandla zabo